ANTSIRABE : MANDRESY I NENY – MyDago.com aime Madagascar
Tao amin’ny Magro Antsirabe ny Sabotsy 08 Jona teo Ramatoa Lalao Ravalomanana niaraka amin’ireo delegasiona niaraka aminy. Nisy ny hetsika notanterahana tany an-toerana nataon’ny movansy Ravalomanana sy ny zanak’I Dada.
Feno fihetseham-po sy fanantenana ny fihaonan’I Neny sy ny vahoakan’ny renivohitr’I Vakinankaratra. Latsa-dranomaso i Neny noho ny fihetseham-po taminy. Velom-panantenana tanteraka Antsirabe iray vohitra satria heverin’izy ireo fa efa santatry ny fandresena izao fandalovan’I Neny izao. Nomarihin’ny solontenan’ny mpitolona rahateo fa nandritra izay efa-taona izay dia tsy nitsahatra nitaky ny hiverenan’ny ara-dalana izy ireo. Ankehitriny vonona handray andraikitra amin’ny alalan’ny fifidianana I Neny ary manohana izany tanteraka izy ireo. Raha nandray fitenenana nanoloana ireo vahoaka an’aliny kosa I Lalao Ravalomanana dia nanamarika fa fotoan’ny fanarenana ny rava izao ary vonona hitarika izany ny tenany. “Tanàna be orinasa Antsirabe fahiny” hoy izy “ary ezaka tsy maintsy atao ny hanarenana ny vokatry ny krizy amin’io sehatra io”. Nentaniny ary ny rehetra mba hifanome tanana amin’izany satria adidy iombonana ho an’ny tanindrazana ny fanarenana ny Firenena.
3 pensées sur “ANTSIRABE : MANDRESY I NENY”
11 juin 2013 à 2 h 43 min
Dingana voalohany @ fandresena izao fa mila zavatra roa lehibe ny Malagasy izao mikasika an’ity fifidianana ity . Voalohany dia ny fanapaha maso sy fanamarinana ny fikarakarana. Ny fifidianana fa ny halatra be Vava dia efa mipetraka etsy sy eroa. , Faharoa dia ny hetsika diplomatika sy ny fiarahana-miasa @ CES sy ny CENI-T mba ho @ izao 24 jolay izao ny fifidianana . Raha tsy izany dia ho very maina izao ezak’i Neny izao.
Mila asa sy hetsika izany ary tsy azo ankinina na @ iza na @ iza fa @ isika Malagasy mpanohana ny ara-dalana IRERY ihany. Izay ilay teny filamatra hoe TSY ADIDIKO IZAHO IRERY, FA ADIDIKO IZAHO SY IANAREO. Enga anie la tsy hanofinofy ny Malagasy fa atrik’asa io ary ny fndinihana sy ny asa irery ihany no hanataterahana azy.
Mangoro-vitsika mihintsy aho eto ampi-jerena ilay vaovao!
Tsy ambara fa dia MITENY NY SARY!!!jereo tsara koa ny endrik’ireto
MPIATSARA-VELATSIA MBA MANANGAN-TANANA FA DIA MISORATRA TSARA @ ENDRINY
.HOMBA ANTSIKA Andriamanitra e!!!
Précédent Article précédent : LALAO RAVALOMANANA : Nanome torohevitra ny mpino ny FJKM Ambatofotsikely Fahamarinana
Suivant Article suivant : Lalao Ravalomanana : « Entintsika am-pitiavana , amin’ny famelan-keloka ary amin’ny fanantenana ny firenena. »